श्रीमानको निधन पछि माइतमा बसेकी सुस्मितालाइ बोलाएर ससुरा र नन्दले गरे ह’त्या – Jagaran Nepal
श्रीमानको निधन पछि माइतमा बसेकी सुस्मितालाइ बोलाएर ससुरा र नन्दले गरे ह’त्या
हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ सूर्य चोक नजिकै भएको ह त्या प्रकरणमा प्रहरीले मृतकका ससुरा र नन्दलाई पक्राउ गरेको छ । असार २ गते बिहान ७ बजे २२ वर्षीय सुस्मिता थापा आफ्नै घरको भान्सा कोठामा मृत फेला परेकी थिइन् ।
अनुसन्धानका लागि थापाका ५८ वर्षीय ससुरा प्रकाश थापा र २३ वर्षीय नन्द सीता थापालाई ज्यान सम्बन्धी कसुर अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले ससुरा र नन्दले ह त्या गरेको आंशकामा बिहीबार पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा उनीहरुले नै ह त्या गरेको देखिएको एक प्रहरी अधिकृतले भने । सुस्मिताका पतिको ६ महिना अघि सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।
यसै क्रममा घटनाको बारेमा आफ्नो दिदि बताउने सुष्म कार्कीले फेसबुकमा घटनाको बारेमा लेखेकी छन् । उनले लेखेको पोस्टमा भनेकी छन् सबैले मलाई के भयो के हो किन भन्नु भयो त्यहि भएर मैले यो पोस्ट गरेको छु । मेरो दिदीको बैसाखमा बिहे भएको थियो अनि भेनाजुको बाइकलाइ ट्रकले हा नेर उँहाको आसोजमा निधन भएको थियो । भेनाजुको निधन पछि दिदि माइतमै बस्नु भएको थियो त्यहि बेला लकडाउनमा ६ महिनाको बरखी छ तिमीले के के चढाउनु पर्ने छ, बत्ति पनि बाल्नु पर्छ भन्दै घरमा बोलाउनु भयो हेटौंडा अनि उंहा हेटौंडा जानु भएको थियो ।
अस्ति मात्र किचनमा मरेको अवस्थामा ला स भेटियो सि’लौटाले टाउको पछाडीबाट हा नेर टा उको र एउटा आँखा फु टेको अवस्थामा भेटियो । दिदीको लासमा धेरै निलो डा महरु पनि भेटियो । के थाहा त्यहि नै उसको अन्तिम दिन हुन्छ भनेर । सबै नराम्रो उसैको साथ आखिर किन पहिला श्रीमानको निधन अनि अहिले उसलाई त ड्पाएर कसले मा र्यो ? त्यो ह त्यारालाई नि यसरि त ड्पाई त ड्पाई मार्नु पर्ने हे भगवान मान्छेहरु कति सम्मको पाई हुन् सक्छन नि । उसको ह त्यारालाई चाडै भन्दा चाडै पत्ता लागेर कडा कारवाही गरेर उसको आत्मालाई शान्ति दिन पर्छ ।
रिपोर्टमा मा रेको भन्ने आइसकेको छ र त्यो गरेको नन्द दुइजना र ससुरालाइ पुलिसले पक्राउ गरेको छ । हे भगवान कसरि मा र्न सकु त्यसरी टा उको फु टाएर हाम्रो संका सहि निस्कियो आज हामी आज चुप लाग्ने हो भने भोलि कोहि बुहारी सुरक्षित् हुन सक्दैनन् । बोलाइ बोलाइ कसरि प्लान बनाएर मा रेउ तिमीहरुको के बिगारेको थियो र उसले । कसैको बिश्वास छैन मानवता भन्ने अब सकियो । उसको श्रीमानको निधन पछि कति बिजोग थियो थुक्क पापीहरु किन यस्तो गरेउ ? अहिलेको जमानामा पनि तिमीहरुले बुढा खाइस भनेर ट चर दिने अनि मा र्ने कहाँ सम्मको अपराध हो यो ?